तिथिहरूमा मात्र बीपीलाई सम्झने संस्कार-Brtnepal.com
Loading... तिथिहरूमा मात्र बीपीलाई सम्झने संस्कार
Published on September 6, 2016 at 6:48 am
नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्व जननायक बीपी कोइरालाको यही साता अर्थात् भदौ २४ गते १०२औँ जयन्ती मनाइँदैछ । यस अवसरमा बीपीको राजनीतिक अनुयायी दल नेपाली काँग्रेस र उहाँका नाममा खडा भएका विभिन्न सङ्घ संस्था तथा साहित्यिक संस्थाहरूको तर्फबाट बीपीको व्यक्तित्वलाई जोडेर विभिन्न किसिमका कार्यक्रम आयोजना गरिँदै छ र कतिपय सम्पन्नसमेत भइसकेका छन् । बीपी दर्शन, जसले जसरी पनि बुझ्न सक्छ । एउटा सामान्य मानिसले पनि आफ्नो तहबाट बीपीलाई जानेको छ, बुझेको छ र त्यसैको आधारमा आदर सम्मान गरेको छ । त्यसभन्दा उपल्लो तहले पनि बीपीको राजनीतिक, साहित्यिक र दार्शनिक चेतलाई व्याख्या विश्लेषण गरिहेको छ र बीपी जीवनको रहस्य खोज्दैछ, बुझ्दैछ । अर्थात् समुद्रमा पानी भर्न जसले जत्रो भाडो लग्यो त्यो भरी पाएको छ । यसरी बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी महामानव कोइरालालाई जसले जसरी बुझेको छ, उसले त्यही रूपमा लिएको छ वा लिन्छ तर यस किसिमका गुण र विशेषता बोकेका बीपी कोइरालाको जयन्ती औपचारिकताले मात्र पूरा हुन्छ कि हुदैँन भन्ने अहं प्रश्न यतिबेला उठ्ने गरेको छ । यो प्रश्न अस्वाभाविक पनि होइन । आज बीपीको योगदानको चर्चा गर्नेहरू कतिले बीपीको आदर्श र निष्ठाको अनुसरण गरेका छन् ? बीपीको अनुयायी बन्न के गर्नुपर्छ भन्ने कतिले बुझेका छन् वा पालना गरेका छन् ? बीपीको राजनीतिक सपना पूरा गराउन अहिलेको राजनीतिले कति सहयोग गरेको छ ? काँग्रेसका नेताहरू मात्र होइन अन्य दलका नेताले समेत बीपीलाई नेपाली राजनीतिका आदर्श व्यक्तित्व मानेर भाषण गरेको सुनिन्छ । खै त ती नेताहरूले बीपीको राजनीतिक गुणको अनुसरण गरेको ? अहिलेको सन्दर्भमा बीपीका राजनीतिक गुण र विशेषताको थोरै पालना गरेमा पनि मुलुकमा देखिएका किसिमका अस्थिरता र बेथिति हटेर जानेछ । यसका लागि राजनीतिक तहदेखि समाजका सबै तहमा रहेका व्यक्ति नैतिकवान र इमानदार हुन जरुरी छ ।
बीपी राजनीतिमा सिद्धान्तनिष्ठ, एक सच्चा राष्ट्रवादी नेताको रूपमा उभिनुभयो । यस विपरीत जीवनभर कसैसँग कुनै किसिमको सम्झौता गर्नु पनि भएन । उहाँमा रहेको यही आदर्श र निष्ठाले राणा शासन र पञ्चायती निरङ्कुशताको अन्त्य गरायो र मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको मार्गमा अघि बढाउँदै समाज रूपान्तरणको नयाँ खाका निर्माण ग¥यो । यथार्थमा बीपी देश र दुनियाँ बुझेको सच्चा राष्ट्रवादी नेता हुनुहुन्थ्यो । यसै कारण आफूमाथि लागेका सात–सात वटा फाँसीका मुद्दाको कुनै वास्ता नगरी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर २०३३ सालमा प्रवास जीवन त्यागेर स्वदेश फर्किनुभयो र देशभित्रै बसेर नागरिक हकअधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्नुभयो । त्यही सङ्घर्षले २०३७ सालमा जनमत सङग्रह गरायो भने यही सङ्घर्षको निरन्तरताले २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२, ६३ को जनआन्दोलन सफल हुन पुगेको हो । बीपीका यस्तै सङ्घर्षपूर्ण अठोटले मुलुकलाई नयाँ युग र चरणमा प्रवेश गराएको हो ।
बीपीले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा कहिल्यै पनि आफूलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुभएन । उहाँले सदैव देश र जनताको स्वार्थमा आफूलाई समर्पित तुल्याउनुभयो । त्यही कारण नै बीपी बीपी बन्नु भएको हो । वर्तमान नेतृत्वमा त्यो नदेखिँदा मुलुकमा ठुला ठुला परिवर्तन हुँदा पनि त्यसको अनुभूति आम नागरिकले गर्न पाउने अवस्था बनिरहेको छैन । दलहरू देश र जनताको पक्षमाभन्दा पनि दलीय स्वार्थ र दलभित्रका गुट उपगुटमा विभक्त रहेका कारण ऐतिहासिक संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानसमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयमा आउनसक्ने अवस्था बनिरहेको छैन । संविधानका विषयमा मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाएका विषयलाई सम्बोधन नगरेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुनसक्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।
आगामी २०७४ साल माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति देख्दा यो समय सीमाभित्र यी काम सम्पन्न हुन्छन् भन्ने लाग्दैन । यथा समयमा तीन तहको निर्वाचन भएन भने देश थप सङ्कटमा पर्न सक्छ । यस सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर निर्णयमा पुग्न सक्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्र बीपीको आदर्शको बखान गरेको सार्थकता रहन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले बीपीबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । अहिलेकोे नेतृत्व वर्गमा त्यही त्याग र समर्पणको भावनाको कमीका कारण मुलुकमा धेरै किसिमका बेथिति उत्पन्न भएका हुन् । वास्तवमा बीपीमा एउटा राजनेतामा हुनुपर्ने विशेष गुण र क्षमता थियो । त्यही क्षमता र गुणले देशलाई समृद्ध तुल्याउने मार्ग चित्र तय ग¥यो । आमनेपालीलाई आफू जस्तै मध्यम वर्गीय परिवार बनाउने सोच र चिन्तन बीपीमा थियो । सबै नेपालीका घरमा एउटा दुहुनो गाई होस्, सबैका छोरा छोरीले पढ्न लेख्न पाउने अवस्था बनोस्, बिरामी पर्दा सामान्य औषधिमूलो गर्नसक्ने अवस्था होस् भन्ने बीपीको चाहना थियो ।
यस अर्थमा उहाँ सच्चा समाजवादी नेता हुनुहुन्थ्यो । त्यसै कारण १८ महिना देशको प्रधानमन्त्रीको पदमा रहदा देशलाई समृद्धको बाटोमा अगाडि बढाउने धेरै योजना र खाका तय गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकमा योजनाविद्हरूलाई योजना आयोगको भित्तामा एउटा हलो जोतिरहेको किसानको तस्बिर राख्नु देशको योजना बनाउँदा त्यही हलो जोतिरहेको किसानलाई हेरेर बनाउन सक्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिनुभएको थियो । गरिब किसान र गाउँको विकासलाई केन्द्रमा राखेर मात्र देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बीपीको परिकल्पना अहिले पनि सान्दर्भिक र यथार्थमा आधारित छ । असी प्रतिशत जनताको बसोबास रहेको क्षेत्र र पेसालाई पर्गलेर मुलुकको परिवर्तन सम्भव पनि छैन ।
बीपीले साहित्यको माध्यमबाट पनि राष्ट्र प्रेम र मानवीय सेवाको भावना प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यस अर्थ बीपी जीवनका विभिन्न पक्ष र पाटा रहेका छन् । समग्रमा बीपीलाई जान्न र बुझ्न यी सबै पक्षको अध्ययन गर्नुपर्छ । विशेष गरेर बीपीको साहित्यिक, राजनीतिक र दार्शनिक पक्षले नेपाली समाजलाई आधुनिक युगमा प्रवेश गराउन ठुलो ऊर्जा र प्रेरणा प्रदान गरेको छ । राजनीतिले अपेक्षा गरेका कुरालाई साहित्यको माध्यबाट व्यक्त गर्ने काम बीपीले गर्नुभएको छ । यस हिसाबले हेर्दा बीपीको राजनीतिक र साहित्यिक दुवै विधा समानन्तर रूपमा अगाडि बढेको पाइन्छ । समाजमा हुने सबै किसिमका गतिविधि र प्रवृत्तिलाई बीपीले साहित्यमार्फत प्रकट गर्नुभएको छ । उहाँले आफ्ना साहित्यिक कृतिहरूमा मानवीय स्वतन्त्रता र अस्तित्वको खोजी गराउने कृतिका पात्रहरूमार्फत गराउनुभएको छ । यसका लागि सङ्घर्ष पनि गराइएको छ ।
यसर्थ उहाँका साहित्यले राजनीतिक चेतनालाई बोकेको छ भन्दा अन्यथा हुने छैन । फेरि साहित्यकार दिव्य दृष्टि राख्ने वर्ग र समुदाय भएकाले साहित्यमा राजनीतिक चिन्तन र चासो व्यक्त हुनु अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । हुन त बीपीको राजनीतिक, साहित्यिक र सामाजिक व्यक्तित्वबाट तर्सेकाहरूले उहाँको कदलाई होच्याउन विभिन्न लाञ्छना प्नि लगाउने काम नभएको होइन । पञ्चायत कालमा बीपीका कृति जलाउनेदेखि बीपीलाई छाडा लेखकको संज्ञा दिनेहरू बीपीको व्यक्तित्वबाट तर्सिनेहरू नै थिए । अन्ततः यसैको परिणाम जनताबाट निर्वाचित पहिलो सरकारका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले लामो समय जेलको कष्टसमेत व्यहोर्नु प¥यो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले मुलुकको स्वतन्त्रता खोसेर नेपाली जनताको लोकप्रिय नेतालाई जेलको कोठरीमा राखे पनि साहित्यमार्फत बीपीले प्रतिवाद गरिरहनु भयो । बीपीको यही प्रतिवाद र अठोटले निरङ्कुशतालाई घुडा पनि टेकायो । यी अठोट र सङ्घर्षका बिच उहाँले मानिस ठुलो होइन असल बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनुभएको छ । ठुलो बन्ने होडमा रहेको समाजले यसलाई कसरी लिइरहेको छ थाहा छैन तर यस सन्दर्भमा यत्ति भन्नुछ– तिथिहरूमा मात्र बीपीलाई सम्झने संस्कार त्याग्नुपर्छ । गोरखापत्रबाट